1. Waxa kale oo jira macmacaan macaan oo aad u fudud in la sameeyo, waana iyaga liiska ugu sarreeya adduunka da 'kasta. Maxaa yeelay waxay leedahay udgoon sasabasho badan Dhadhan jilicsan oo jilicsan Kulamo leh noocyo badan oo suxuunta dhinac ah Qurxin si quruxsan iyadoo loo eegayo dhadhankaaga ama waxa aad ku haysato guriga sifiican. Waana menu ay caruurtu sameyn karaan Ku dar madadaalo iyo dhadhan macaan ciidaha ama maalmaha shaqada oo leh hawlo fudud. Laakiin dareen gaar ah Iyo sida loo sameeyo canjeelada In kasta oo ay tahay liis fudud Laakiin ku sii xusuusnow cabbir kasta oo hubaal taabasho leh
2. Baro canjeerada caanka ah ee caanka ah, Pancake (Pancake) waxaa loo tixgeliyaa nooc keeg ama rooti siman. Isticmaalidda alaabta ceyriinka ah ee laga sameeyay burka lagu qasay caanaha, subagga, ukunta, sonkorta ama qof kasta oo qallooc sameyn kara laakiin jeclaan lahaa Adoo keenaya bur si aad ugu shiisho saliid ama subag ilaa la kariyo Sidaa darteed ayaa ereyga Pan ku lifaaqan Ma asalka magaca macmacaanka, canjeelada ayaa loo cunaa si kulul Sida quraacda Ama lagu qurxiyo sharoobada Malab iyo miro Sidoo kale shukulaatada Waxaa lagu samayn karaa qaabka aan annaga iyo qoyskeenuba jecel nahay.
3. Waxyaabaha ay ka kooban tahay samaynta canjeelada ayaa loo yaqaanaa maaddooyinka ku dhowaad dhammaan madbakha ay ku dul yaalaan iyaga, oo ay adag tahay wax iibsi dheeraad ah.
4. Sida loo sameeyo canjeelada Cunto macaan iyo macaan badan • Burkulka ku daadi bur, sonkor, cusbo, budada dubista weel kuna walaaq dhamaan waxyaabaha ku jira • Ukul ukunta oo ku shub caanaha lo'da oo ay ku jirto dhadhan yar oo vanilj ah. Ka dib isku walaaq wax walboo isku mid ah • Markii walaaqadu dhammaato. Ku dhalaali subagga biyaha. Meel u dhig diirimaadka, ku dar subagga oo walaaq ilaa inta ay le'eg tahay. Meel yar dhig: • Ku kari digsiga kuleylka dhexdhexaadka ah. Ilaa iyo inta digsigu ka bilaabmayo kulaylka • Markay digsiga kulaylku ka bilowdo Ku dar subag yar.
5. • Quruxda samaynta canjeelada, dooro digsi fidsan • Kadib sug inta subaggu gebi ahaanba dhalaalayo • Bilaw inaad ku shubtid isku darka canjeelada dabka. Qaabka caanka ah ayaa wareegsan. Cabbir wax alla wixii aad jeceshahay Ama qof kasta oo qaba buunshar ayaa digsiga dusha ka saari kara oo ku dari kara baytariga canjeelada • Dul mar canjeelada ku wareeji. Ilaa canjeeladu ay noqdaan bunni qafiif ah, qurux badan • Diyaarso saxanka adiga oo suuro gal ah inaad dhinac-dhinac u dhigto miraha macaan iyo kuwa dhanaan, ku dar kareem la dubay, ku kari saydh, ku shub malab, diyaarna u ah inay adeegto
6. Xilliga cimilada qabow, kaliya hayso canjeelo macaan oo macaan oo cabbo shaah, kafee ama kookaha kulul. Waxay ka caawisaa abuurista jawi fudud Si aad u diiran oo qurux badan Ku darso menu ay carruurtu u qarin karaan sida ay jecel yihiin Sidoo kale qurxinta taarikada sida farshaxanka aan xadidneyn Taasi waa qabow Aynu ku darno diirimaad hab fudud oo loo sameeyo canjeelo si farxad loogu abuuro qoyskaaga !!!